महिला व्रत बसेको बेला यौनसम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ! यस्ता छन् तर्क ? « Janaboli
महिला व्रत बसेको बेला यौनसम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ! यस्ता छन् तर्क ?
काठमाडौं । धर्मशास्त्रमा महिला व्रत बसेको दिन सुद्ध दिन हुने भएको हुनाले यौन सम्पर्क गर्न नहुँने उल्लेख छ । दिनभर भगवानको नाममा उपवास बसेकी महिलामाथि सहवासको कुरा सोच्न पनि नहुने शास्त्रमा उल्लेख छ । व्रत बसेको दिन महिलाहरू मानसिक रुपमा पनि तयार हुन नसक्ने र शारीरिक रुपले पनि निकै थकित हुने हुँदा सहवासका लागि बाध्य बनाउन नहुने परम्पारागत मान्यता रहेको पाइन्छ ।
बिशेषगरी तीजमा व्रत बसेकी महिला बेलुका श्रीमानसँग नसुति अलग्गै सुत्नुपर्नेमा शास्त्रमा भनिएको छ । तीजमा विवाहिता महिलाहरु श्रीमानको घरमा नबसी माइतीमा बस्नुलाई पनि सहवासको अर्थसँग जोडिएको धर्मशास्त्रीय मान्यता रहेको शास्त्रका ज्ञाताहरु बताउँछन् । धार्मिक आस्थाले भगवानप्रति भक्तिभाव लगाइरहेका बेला कामवासनालाई नियन्त्रण नगरी यौन क्रिडामा लिप्त हुँदा व्रतको फल नपाइने पनि शास्त्रमा उल्लेख छ । यद्यपी चिकित्सा विज्ञानले भने धर्मशास्त्रका कुरालाई अस्वीकार गर्दछ ।
यौन मानव जीवनको सामान्य चरण भएकाले महिला मानसिक तथा शारीरिक रुपले तयार भएमा सहवास गर्दा फरक नपर्ने चिकित्सकहरुले बताउँछन् । निराहार व्रत बसेका बेला भने महिलाहरु थकित हुन सक्छन् । यस्तो बेलामा शरीरमा पानी, ग्लुकोज तथा क्यालोरीको कमी हुने भएकाले महिलाहरुलाई यौनसम्पर्कका लागि तयार हुन कठिन हुने भएकाले आफ्नो पतिको मनोभावनालाइ बुझेर मात्र यौनसम्पर्क गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् । एजेन्सी
हरेक पुरुषमा हुने तर महिलाले पनि बुझ्नैपर्ने रोग हो शी*घ्रपतन [कारण, लक्षण र घरेलु उपायसहित]
काठमाडौं । शिघ्र पतन यो रोग पुरुषमा हुने रोग हो । यो रोगले गर्दा पुरुषले
काठमाडौं । नेपाली समाजमा यौन समस्यालाई दबाएर राख्ने चलन छ । यो आफैंमा गलत कुरा
यौन सम्पर्क गर्दा युवत्तीको योनी-स्तन चलाउँनु पर्छ कि पर्दैन ! [१८+ ले हेर्नुहोला्]
काठमाडौं । यौन जीवनमा सन्तुष्टि अत्यन्तै महत्वपुर्ण हुन्छ । महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा योनी जति संवेदनशील
यौन जिज्ञासा : मैले अरुसँग यौन सम्पर्क गरेको मेरो श्रीमानलाई थाहा हुन्छ कि हुदैंन ?
म युवती हु मलाइ २० भयो । मेरो विवाह भएको छैन, तर ब्वाइफ्रेन्ड छ ।